Njengoba kufika isikhathi esifudumele, amabhishi athandwa kakhulu eNovosibirsk avulekile: i-Boomerang, i-Remix, iMeak, i-Lokomotiv. Zihluke kanjani kwabanye, futhi abahlali bacabanga ngani ngenkonzo?
Ihlobo yisikhathi somhlabathi ofudumele, amanzi aluhlaza nokuphumula komndeni. Uma kungenakukwazi ukuya emazweni afudumele, ulwandle luyoba yindawo ngempelasonto. Izakhamuzi zedolobha zinikezela izinketho ezifana nenkonzo, ukuhlanzeka nokuphepha.
Ibhishi "i-Boomerang" e-Novosibirsk
Le ndawo iyathandwa phakathi kwabahlali bomuzi. Ibhishi elithi "Boomerang" eNovosibirsk lingenye yezinto ezinhle kakhulu. Itholakala ogwini lomnikazi we-Ob.
Ibhishi elisolwandle lunezinto ezidingekayo zokuzilibazisa. Kukhona izambulela lapha ukukusiza ukuba ubalekele elangeni. I-sofas yasehlobo inikeza ithuba lokulala phansi, ukuphuza i-cocktails noma udle i-ayisikhilimu ngenduduzo.
Engxenyeni yolwandle "i-Boomerang" e-Novosibirsk kunamakholomu, imigoqo, izindawo zokudla. Indawo yokudlala yezingane kuyoba yisisombululo esihle kakhulu sokuholwa komndeni.
Kukhona ukuqashwa kwamakhamera izivakashi, kanye nama-slides amanzi.
Ibhishi lihlanzekile, lizungezwe izihlahla zikaphayini. Imvelo namanzi zakha indawo ekahle yamaholidi ehlobo.
Ibhishi elithi "Boomerang" eNovosibirsk akuyona nje isihlabathi esifudumele. Le yindawo lapho ungaba khona isikhathi esikhulu nabangani bakho futhi ugubhe iholidi.
Ubungqayizivele ebhishi ukuthi awukwazi ukuphumula kuphela lapha, kodwa futhi ungenele ezemidlalo. Kukhona ukuqashwa kwemishini yokuqina, inkundla yebhola iyatholakala. Abaphathi bama-surfing abanokuzikhandla futhi abakhuthele bazofunda ukugibela emgodini wegagasi.
Lolu lolwandle luyipaki lokuzilibazisa. Itholakala ogwini lwaseBerdsky Bay. Le ndawo ilungele amaholide omndeni.
I-Remix Beach eNovosibirsk ifakwe ngamachibi amabili okubhukuda amakhulu anamanzi ahlanzekile. Esihlabathini, kunama-sun loungers angama-800 ongahlala kuwo ukuze uphumule futhi uphumule.
Umkhumbi osebeni lolwandle kuyindawo yokudlela enesidlo esimnandi nesimo esihle. Kungaba umshado noma usuku lokuzalwa.
I-play enkulu eyinkimbinkimbi ifakiwe kubantwana. Lokhu kunikeza abazali ithuba lokuphumula noma ukuthatha indwangu. Futhi izivakashi ezincane zepaki kukhona ichibi elincane elinesilayidi.
Izivakashi zibona inani eliphansi letikiti - ama-ruble angu-250 kuphela umuntu ngamunye. Emnyango kukhona indawo yokupaka enkulu, lapho ungashiya imoto yakho.
Ibhishi livela eceleni kwePlotinnaya street, 1/1. Kukhona ngesisekelo se-yacht club "Mayak". Ibhishi laseNovosibirsk liyathandwa naphezu kokungena okukhokhelwe. Amathikithi osukwini lonke ngempelasonto: abadala - ama-ruble angu-600, izingane - 400, kuze kube ngu-12 iminyaka - mahhala.
Ibhishi linamachibi okubhukuda, ama-sun loungers nama-mattresses, izambulela ezinkulu zasebhishi. Umculo udlala ngokuthula, ngakho ngeke uphazamise nalabo bantu abafika kule ndawo ukuze baphumule.
Ama-animator asebenzela izingane, ahlela imincintiswano ehlukahlukene futhi abuyele emidlalweni. Izivakashi ezincane ngeke zibe nesikhathi sokuthuthumela.
Izivakashi zikhona ithuba lokugibela hhayi emkhunjini kuphela, kodwa nakwe-yacht. Kukhona i-cafe ogwini.
Engxenyeni yepaki yaseZaeltsovsky kukhona ibhishi elingasese, elithandana nabantu basezindaweni ezinobuningi bayo. Le ndawo ikuvumela ukuba uhlanganise ukuphumula nokunye ukuzijabulisa kubantwana nakubantu abadala.
Eduze elwandle "Lokomotiv" kunesitimela sezoo nezingane. Epaki ungakwazi ukugibela ibhayisikili, i-roller skate noma ugijime.
Kukhona ichibi elikhulu lokubhukuda ogwini. Kukhona ithuba lokulala emhlabathini oshisayo. Ngokuhlukile, ithala elinama-sun loungers. Kuzingane kukhona ichibi elincane lokubhukuda lapho lingakwazi ukubhukuda khona.
Izindleko zetikithi ebhishi zixhomeke endaweni yokuphumula kanye namabanga ukusuka ku-ruble ayi-100 ukuya kwangu-300 ngehora. Izivakashi ziphawula ukuthi le ndawo ihlaziye kakhulu, lapha ungakwazi ukuphumula ngemva komsebenzi wosuku.
Imithetho yokuvakashela ogwini
Izakhamuzi eziningi zedolobha ezinsukwini ezifudumele zichitha isikhathi emapaki nasezintabeni. Imithetho elula yokuvakashela ogwini izosiza ukwenza ukuchitha isikhathi isikhathi kusebenze futhi kuphephile.
Ngosuku olushisayo, indawo ikhethwa ngakho-ke ukuthi akukho ilanga eliqondile. Indlela engcono kakhulu isambulela se-beach. Lokhu kuzosiza ukugwema ukushisa kwelanga noma ukushisa.
Kudingekile ukusebenzisa isikrini selanga esikhumbeni.
Egwini akuvunyelwe ukuthatha izilwane ezifuywayo.
Bathe ezindaweni ezikhethiwe noma echibini.
Ezindaweni zomphakathi, ezifana nolwandle, akunconywanga ukukhuluma ngokuzwakalayo noma ukulalela umculo.
Uma ufuna ukuba nepikinikini, udinga ukukhumbula ukuhlanza udoti futhi ungaphazamisi abantu abakuzungezile.
Ukubhema okulele esihlabathini noma esilangeni kungavunyelwe ngokuphelele. Wonke amabhishi anesakhiwo esikhethekile namatherafri.
Ukuqaliswa kwemithetho enjalo elula kuzokwenza konke kube ngcono, futhi kulondoloze ukuhlanzeka kwemvelo.
Amabhishi aseNovosibirsk - "Boomerang", "Remix", "Mayak", "Locomotive" nabanye bavula iminyango yabo lapho kufika ukushisa. Ehlobo ngalinye, benza izakhamuzi zedolobha kanye nezivakashi zijabule ngamanzi ahlanzekile, isihlabathi eshisayo kanye nokuzijabulisa okuhlukahlukene.
Iziphethu Zokushisa: I-Adygea imema
Grand Theatre lihlukile Maly Theatre?